Daawo Sawirro: Maalin Baroordiiq looga dhawaaqay Ruushka & burburka dayuuradii dhacday oo la helay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirro: Maalin Baroordiiq looga dhawaaqay Ruushka & burburka dayuuradii dhacday oo la helay!!
Daawo Sawirro: Maalin Baroordiiq looga dhawaaqay Ruushka & burburka dayuuradii dhacday oo la helay!!
Madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin ayaa ku dhawaaqay maalin baroordiiq Qaran, iyadoo Hadalkiisa oo laga baahiyey Telefishinada dalkaasi uu ku soo beegmay ka dib, markii la shaaciyey inaysan cidina ka badbaadin Dayuuradii Milliteri ee ku dhacday Badda Madow ee dalkaasi.
Dayuuradan oo nooceedu ahaa TU-154 waxay burburtay daqiiqado ka dib, markii ay ka kacday magaalladda Sochi ee Koonfurta dalkaasi waxayna ku sii jeeday wadanka Siiriya.
Afhayeenka Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa xaqiijyey inay wada geeriyoodeen 92-kii qof ee saarnaa Dayuuradaas oo ay ku jireen fanaaniin, weriyeyaal caan ka ah dalka Ruushka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dalkaas.
Haraagga burburka Dayuuradaasi ayaa laga helay meel 1.5-km ka baxsan Xeebaha Sochi.
Lix markab, Hal gujisa iyo in ka badan boqol badmaaxayaal ah ayaa ka qeyb qaadanaya baadigoobka maydadka dadkii la socday Dayuuradaasi oo qaarkood la soo helay kuwa kalena weli badda laga raadinayo.
Dadka dayuuradan la socday ayaa waxaa ku jiray Suxufiyiin uu ku mid ahaa Suxufiga caanka ee Dmitry Runkov oo dalka Ruushka si weyn looga garanayo.
Sannadkii 1983-dii ayaa dayuuradan lagu farsameeyey dalka Ruushka waxayna ku sii jeeday Saldhigga Ciidanka Ruushku ku leeyihiin dalka Siiriya, waxaana Fanaaniinta loo waday inay Ciidanka halkaas jooga kala qeyb galaan Dabaaldegga sannadka cusub ee 2017-ka iyo ciida Chrismiska.
Fannaaniinta ku geeriyootay shilkan ayaa waxaa ku jiray Lamaanaha Ralina Gilmanova iyo saaxiibkeed Mikhail oo caan ka ah Ruushka.
Previous PostMUUQAAL: Faarax Macalin “Soomaaliya DOORASHO kama socoto, Xumaan way dhaaftay, Itoobiya ayaa Liqaysa daawo Next PostGuddoomiyaha gobolka Banaadir oo ka soo horjeestay xubnaha lagu kordhiyey aqalka sare!!